बहिनीलाई बिएससी नर्सिङ पढाउने पठाओ राइडर सुनिलको सपना खो’स्यो टि’परले ! – Online Khabar 24
बहिनीलाई बिएससी नर्सिङ पढाउने पठाओ राइडर सुनिलको सपना खो’स्यो टि’परले !
सुनिलप्रसाद महतो दिनभरि मोटरसाइकल वर्कसपमा काम गरेर बुधबार साँझ आफ्नो डेरा फर्केका थिए।कलंकीस्थित उनी काम गर्ने वर्कसपबाट डेरा नजिकै थियो।
उनी पुग्दा कान्छी बहिनीले कोठामा खाना पकाइसकेकी थिइन्। हत्तपत्त खाना खाएर उनी मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर निस्किइहाले।
पर्सा, जगरनाथपुर गाउँपालिका घर भएका २५ वर्षीय महतो दिनभर वर्कसप र रातको समय पठाओ राइडरको काम गर्थे।दसैंको फूलपातीको दिन मात्रै बागमती प्रदेश-२-०३०प ८७२५ नम्बरको नयाँ मोटरसाइकल निकालेपछि उनले अतिरिक्त कमाइका लागि पठाओ राइडरको काम सुरू गरेका थिए।
अहिले उनकी बहिनी बिएस्सी नर्सिङ पढ्ने तयारीमा थिइन्। ‘बहिनीलाई बिएससी नर्सिङ पढाउने भनेर रातदिन काम गरिरहेको थियो,’ शुक्रबार महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा भेटिएका प्रेमचन्द्रले मलिन स्वरमा भने।त्यस दिन साँझ घरबाट निस्केका सुनिल राति अबेरसम्म फर्केनन्।
फर्किएलान् नि भनेर बहिनीले पनि राति खोजी गरिनन्।बिहान सुनिलको मोबाइलमा फोन गर्दा पो उनले थाहा पाइन्- सुनिल त राति नै दु’र्घटनामा बि’तिसकेछन्। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevभाइरल झाक्रीको मृ त्यु बारे उनका बुबाले खुलाए यस्तो सनसनी पुर्ण कुरा (भिडियो हेर्नुस्)
nextराती ५ सय रुपैया दिने सर्तमा स’म्बन्ध भयो, विहान पैसा नदिएपछि भयो ल ‘फ डा (भिडियो हेर्नुस्)